ဖူးနုသစ်: ကြောင်စီကွေး လမ်းညွှန်
ကြောင်စီကွေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကာတွန်းဆရာ မောင်ဝဏ္ဏက စသုံးခဲ့တာပါ။ ကြောင်စီကွေးဆိုတာက မိန်းကလေးတွေ တွေ့ရင် ကြောင်တယ်။ ရည်းစားရှိရင် နောက်က ဝင်တန်းစီတယ်။ (ဒါမှ သူ့ရည်းစား ချေးကားတိုက် သေသွားရင် အဆင်သင့် နေရာယူလို့ ရအောင်လို့ ဆိုပါတယ်။ :D ) အိမ်ရောက်တော့ အဲဒီ ကောင်မလေးတွေ အကြောင်း စဥ်းစားပြီး ကွေးကွေးလေး အိပ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ကြောင်စီကွေးလို့ ခေါ်တယ် လို့ သမိန်ပေါသွပ် ကာတွန်းစာအုပ် တစ်အုပ်ထဲမှာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း ကြောင်စီကွေးရင်း အချိန်တန်တော့ နံပါတ်လေး ချိတ်သွားကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ မနှစ်ကလည်း ကြောင်စီကွေး၊ ဒီနှစ်လည်း ကြောင်စီကွေး၊ နောင်နှစ်မှာလည်း ကြောင်စီကွေးနဲ့ ကြောင်စီကွေး ဘဝက လွတ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ လမ်းမမြင် ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကြောင်စီကွေး ဘဝက ကျွတ်လွတ်ဖို့အတွက် တက်ကနီကွီး လေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ကြောင်စီကွေးတဲ့ နေရာမှာ ပုံသေနည်း မရှိပေမယ့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေတော့ သိဖို့လိုပါတယ်။
ဇီဝလောကတွေမှာ အီဗော်လူးရှင်း လို့ခေါ်တဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိသလို ကြောင်စီကွေး လောကမှာလည်း အီဗော်လူးရှင်း ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်က ခေတ်နဲ့လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနေလို့ပါ။ အဲဒီတော့ အမိုက်စား အလန်စားလေးတွေ ကို ကြောင်ချင်ရင်တော့ ကြောင်စီကွေး တက်ကနီကွီးတွေကို ခေတ်မီအောင် ပြောင်းလဲ ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ပထမဆုံး အဆင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုက စပြီး ကြောင်မလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပါ။ ခေတ်နဲ့ အလျော်ညီဆုံး အကောင်းဆုံး အကြံပေးချက် ကတော့ ဘယ်သူ့ဘယ်ဝါဆီကမှ သွယ်ဝိုက်ပြီး မချဉ်းကပ်ပဲ တိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ်ဖို့ပါ။ ကောင်မလေးက တို့ကိုချစ်ရင် တို့အိမ်လိုက်ပြော တို့အိမ်ကကြိုက်ရင် တို့အိမ်ကလူနဲ့ ယူလိုက် ဆိုရင်တော့လည်း တမျိုးပေါ့။ အဲဒီလို မဟုတ်ပဲ ခေတ်ဟောင်းက နည်းအတိုင်း သူငယ်ချင်းကနေ တစ်ဆင့် ချဉ်းကပ်မယ်။ ယောက္ခမသား (ယောက်ဖခေါ်ရင် အရှုံးရှိနိုင် သေးတယ်။)ကနေ တဆင့် ချဉ်းကပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အခန့်မသင့်ရင် ချောက်ကျ နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကတော့ ကောင်မလေးကို ကြောင်ချင်တာကို တိုက်ရိုက်မကြောင်ပဲ သူ့သူငယ်ချင်း ကနေတဆင့် ချဉ်းကပ်ပါတယ်။ နောက်တော့ သူသွားကပ်တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းက "ဟဲ့။ နင်နဲ့ငါ့ကို လူတွေပြောကုန်ကြပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။" ဆိုမှ "ငါကြိုက်တာ နင့်ကိုမဟုတ်ဘူး။ နင့်သူငယ်ချင်းကို။" လို့ပြောပြီး အမြန် လစ်ပြေးခဲ့ရဖူး ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခေတ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း မရိုးနိုင်တဲ့နည်းကတော့ အကြောင်ရိုက်တဲ့နည်းပါပဲ။ ကောင်မလေးတွေ အတော်များများက နည်းနည်း တွေဝေတတ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း ဘလိုင်းကြီး သွားကြောင်ရင် ကောလွှတ်ချင် ကောလွှတ်ပေမယ့် အကြောင်ရိုက်ရင်တော့ ဇဝေဇဝါနဲ့ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်ပြီး စကားလက်ခံ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ပွားရင် ပွားတတ်သလို ကိုယ့်ဖက်ပါအောင် ဆွဲလို့ ရတာပါပဲ။
တစ်ခါတုန်းက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ ကောင်မလေး အမိုက်စားလေး တစ်ယောက်ကို ပွားဖို့ သူထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားကြဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးက သူ့ဆီဖုန်းဆက်ရင် စကားတစ်ခွန်း နှစ်ခွန်းပြန်ပြောပြီးတာနဲ့ ဖုန်းကိုဘေးချ ကက်ဆက်ဖွင့် ပေးထားခဲ့တာနဲ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ရှောင်ထွက်သွားတာနဲ့ ပညာမျိုးစုံပြတော့ တစ်ကောင်မှ မအောင်မြင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးပိတ် အကြောင်ရိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ တွေ့မှပဲ ပွဲပြီးပါတော့တယ်။ ဟိုကောင်က ဖုန်းစဆက်ကတည်းက "မင်းကို နေ့လည်က ဘဲတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့လိုက်တယ်။ ဘယ်ကကောင်လဲ။ ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။" ဆိုပြီး ဇာတ်လမ်းထွင် အကြောင်ရိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောတော့ ကောင်မလေးက အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီး "မဟုတ်ရပါဘူး။ သူ့မှာ ဘယ်ကဘဲမှ မရှိရပါဘူး။" ဆိုပြီး အတင်းငြင်းပါတယ်။ ဟိုကောင်ကလည်း မလျှော့ဘူး။ ဟုတ်တယ်ချည်း စွတ်ပြောပါတယ်။ နောက်တော့ ကောင်မလေးက ဇဝေဇဝါနဲ့ သူ့ကို ပြန်တောင်းပန်တဲ့ အဖြစ်ရောက်သွားပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ၅ မိနစ်ပြည့်အောင် စကားပြန်မပြော ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးလည်း အဲဒီကောင်နဲ့ တွေ့မှ သူ့မှာ ဘဲမရှိကြောင်း ဖြေရှင်းချက် ထုတ်နေရတာနဲ့ နာရီဝက်လောက် လက်ခံစကား ပြောလိုက်ပါတယ်။ စင်ကာပူက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အကြောင်ရိုက် ဇာတ်လမ်းများ ရှိပေမယ့် ဘလော့ခ်ပေါ် တင်ရေးရင် ဝိုင်းသမ ခံရမှာမို့ ရေးမပြတော့ပါဘူး။ :D
ယောက်ျားလေး အများစုက ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ကြိုက်ရင် ငြိမ်ငြိမ်နေလေ့ မရှိပါဘူး။ အနားမှာ ရှိသမျှသူ အကုန် လှည့်ပတ် ပြောတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ တကယ် စိတ်ရင်းနဲ့ ကူညီတဲ့သူ ရှိသလို တတ်သလို မှတ်သလိုနဲ့ တလွဲဆရာကြီး လုပ်တဲ့သူ၊ အဆင်း ဘီးတပ်လွှတ်ပေးတတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တပည့်မွေး မကောင်းသော ဆရာတွေ နာမည်ပျက် တတ်သလိုမျိုး ဆရာမွေးမကောင်းတဲ့ တပည့်တွေလည်း ဒုက္ခနဲ့ လှလှတွေ့တတ်ပါတယ်။
ဒီခေတ်က ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲခေတ်မို့ မိန်းကလေးက စတာ အထူးအဆန်း မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ကောင်မလေး တစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး လာပွားပါတယ်။ ကောင်မလေးက အမိုက်စားလေးပါ။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်အတော်ကြာ ပွားပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ကောင်မလေးက သူ့ကို အိမ်အပြန် လာကြိုဖို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဟိုကောင်က အတွေ့အကြုံမရှိတော့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိပဲ နီးစပ်ရာ အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်ကို သွားပြီး အကြံ ​တောင်းပါတယ်။ ဟိုပုဂ္ဂိုလ်က "ကောင်မလေး ပိုစိတ်ဝင်စားအောင် ချိန်းတဲ့နေ့ သွားမတွေ့နဲ့။ ပစ်ထားလိုက်။" လို့ တလွဲ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့အကြံကို လိုက်နာမိတဲ့ ရလာဒ်ကတော့ အဲဒီကောင်မလေးနဲ့ မတွေ့လိုက်ရတဲ့ အပြင် အဲဒီ ကောင်မလေးကို လုံးဝ ဆက်သွယ်လို့ မရတော့ တာပါပဲ။ အဲဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ကို လာပြန်ပြောပြတော့ "အသုံးမကျတဲ့ကောင်။ ဘာကိစ္စ ဟိုအစ်ကိုကြီးကို ဆရာ သွားတင်ရတာလဲ။ သူ့နည်းလမ်းသုံးရင် သူ့အရွယ် အဖွားကြီးတွေပဲ မင်းကြောင်လို့ရမှာပေါ့။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ကောင်မလေး တွေက သူတို့ကို ဂရုစိုက်တဲ့သူပဲ လိုချင်တာ။အဲဒီလို ဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ မိန်းကလေးမပြောနဲ့။ ကိုယ့်ရည်းစားတောင် ဂရုမစိုက်နိုင်ရင် ဂရုစိုက်နိုင်တဲ့ ကောင်နောက် ပါသွားမယ်ဆိုတာ မှတ်ထား။" ဆိုပြီး ဝိုင်းဆဲလွှတ်လိုက် ကြပါတယ်။
ရေးချင်တာတွေ ကျန်သေးပေမယ့် ဆင်ဆာ ဖြတ်နေပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အပိုင်း(၂) ကို မျှော်ပါ။
Posted by ZT at 7:38 PM
စာေပစိစစ္ေရး/ ဆင္ဆာကို လာဘ္ထိုးလိုက္ပါလား၊ ေနာက္တစ္ပိုင္း ျမန္ျမန္ထြက္ေအာင္..
ဒီတစ္ခုေတာ့ ဦးနီကုဒ္နဲ႕ ျပန္ေကာ္ပီ မကူးႏိုင္ေတာ့ဘူး :P
က်ေနာ္ကေတာ့ နံပါတ္ခ်ိတ္ျပီးသားမို႕ .....
ဟယ္... ကိုလူေထြး.. ႂကြားခ်က္ ရက္စက္တယ္...။
ကုိယ္ apply လုပ္လုိ႔ မရေတာ့ေသာ္လည္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ လာေရာက္မွတ္သား သြားပါတယ္။
ZT ေရ မေရာက္တာ ၾကာလုိ႔... ဖတ္လုိ႔ ရတာနဲ႔ ေက်နပ္ၿပီး ျပန္သြားတယ္... font install လုပ္တာ အဆင္ေျပသြားလုိ႔ေလ
Thanks, Ko ZT.
I already done this procedure.
I am afraid to ask someone who shout to me. So, I won't ask someone who I don't know.
I think u may understand me what I mean.
if u have time, plz .. help me.
I think u r kindness to all. :)
(myaut tar hote bu).
actually, I like ur writing.
Now,I decided I will install unicode font to read ur post after I can use zawgyi keyboard.
ေယာက်ာ္းေကာင္း ေမာင္းမ တစ္ေထာင္ ဆိုတာ စလံုးသူေလးေတြ လက္ခံေအာင္ ေရးပါဦး =D
ေတာ္တယ္ဗ်ာ။ ဆရာေဖျမင့္တုိ႔ ႀကီးပြားေရး စာအုပ္ေတြေရးသလုိ ကုိဇက္တီလည္း နိႆရည္းေတြ ႐ုိက္ထုတ္ရင္ လက္မလည္ေအာင္ ေရာင္းရမွာ ေသခ်ာတယ္။
ေဇာ္သက္တေယာက္ ေတာ္ေတာ္လက္ေစာင္းထက္ေနၿပီေပါ့ေလ ....
ဒီေန႔မွ ေဖာင့္ Install လုပ္ၿပီး ဖတ္လို႔ရတယ္ ..
Good job done..:)